China Isiri-mydriatic + Contrast Yakabatanidzwa Dhijitari Kufungidzira Sisitimu TNF507 Kugadzira uye Fekitori | SDK
Iyo TNF507 fundus kamera, kuburikidza nekubatanidzwa kweakasiyana mafirita masisitimu, inosanganisa iwo matatu mashandiro efundus angiography, fundus color kutora mafoto, uye fundus isiri-mydriatic color Photography. Izvo hazvisi chete zvinosangana nezvinodiwa zvezuva nezuva zvemakiriniki eepthalmology, asi zvakare zvinofunga izvo zvinodikanwa zvekuongorora fundus. Yakashongedzerwa neiyo yakakura pikisheni resolution, SLR imaging system, yakanakisa Optical system, yepamusoro-inoshanda uye yepamusoro-mhando fundus imaging mhinduro, kupa vatengi nemakiriniki anodikanwa fundus mifananidzo.
✦ Yakakwira pixel resolution yekumisikidza, ichipa vatengi ruzivo rusingaenzaniswi ruzivo.
Iyo TNF507 fundus kamera inopa 18 mamirioni pikicha mifananidzo ine yakanakisa Optical imaging system. Mufananidzo wacho uchiri kujekeswa mushure mekuwedzera kukwana, izvo zvakakosha pakuonekwa kwezvipenga zvidiki.
✦ External SLR imaging system inobvumidza vatengi kuti vawane zvirinyore-tsananguro mifananidzo
Iyo TNF507 fundus kamera inoshandisa yekunze SLR imaging system, iyo isingangopa chete akajeka mavara uye akapfuma ruzivo, asi zvakare inoita kuti zvive nyore kukwidziridza chimbo.
✦ Yakakwira-pikisi yekufungidzira, ichipa vatengi zvinhu zvisingaenzanisike zvemifananidzo
Kana iyo TNF507 fundus kamera iri mu fluorescence imaging modhi, inogona kugovera vatengi nemhando yepamusoro-resolution uye yepamusoro-soro mifananidzo yemifananidzo. Kunyangwe tsinga dzeropa diki dzichiri kuoneka zvakajeka. Panguva imwecheteyo, kuderedzwa kwakanyanya kwechiedza kunowedzera zvakanyanya kunyaradza pamwe nekubatana kwevarwere. Mifananidzo yakajeka, iri nyore kuwana.
✦ Mhando mbiri dzemavara mafoto, kusanganisira asiri-mydriatic uye akawedzeredzwa mavara mafoto, akabatanidzwa mune imwe
TNF507 fundus kamera ine ese asiri-mydriatic mavara mafoto uye mydriatic color Photography. Zadzisa zvakakwana izvo zvinodiwa zve ophthalmology nyanzvi fundus bvunzo uye fundus kuongorora.
✦ Nyore interface, iri nyore mashandiro, nyore kushandisa
Iyo TNF507 fundus kamera ine yakapusa kutaridzika uye yakapfuma yekubatsira imaging system. Iyo mbiri-dot yakabatsira kutarisa mamiriro ekuisa inoita kuti ive nyore kwazvo kushandisa kunyangwe kune vanoshanda vasina kumboshandisa fundus kamera.
✦ Yakaderera kupenya mode
Kana iyo TNF507 fundus kamera iri mune yakaderera-kupenya mode, inogona kuunganidza yakajeka uye yakajeka fundus mifananidzo ine yakanyanya kuderera kupenya kupenya, izvo zvinowedzera zvakanyanya kunyaradzwa kwemurwere.
Ruvara pikicha, isiri-mydriatic kara pikicha, hapana mwenje mutsvuku, fluorescence mutsauko
Munda wekuona kona
Fundus yekutarisa nzira
Minimum mudzidzi dhayamita
Mydriasis 4.5 mm, isiri-mydriatic 3.3mm (mune diki nzira yemudzidzi)
Dhijitari yekuwana fomu
External SLR maitiro
Refractive muripo renji
Inobatsira nzira yekutarisisa
Kaviri doti kubatsira
Dual screen kuratidza
Inenge makumi masere nemasere pamberi nepashure, ingangoita 100mm kutenderedza
Chinja kumusoro uye pasi
Kumusoro ingangoita 15 °, kudzika ingangoita 10 °
Chinja kuruboshwe uye kurudyi
Kuruboshwe 30 °, kurudyi 30 °
Pashure: Akatungamira mashanu-anomhanyisa zoom akachekesa mwenje maikorosikopu ML-350
Zvadaro: Ophthalmic AB ultrasonic yekuongorora chiridzwa SDK180ABT
Dhijitari Fundus Kamera
Fundus Fluorescence Contrast Chishandiso
Handheld Fundus Kamera
Kwete Mydriatic Fundus Kamera
Asiri-Mydriatic Fundus Kamera Ine Angiography
Inotakurika Fundus Kamera
Semiconductor Frequency Yakapetwa 532nm Fundus Laser
Semiconductor Frequency Yakapetwa 532nm Fundus Laser Posterior Chikamu